Ukushiswa Kuphilileyo: Jessica Chambers
Imiba Uphando novavanyo
Intsha Yafelwa Ukushisa kwi-98% yoMzimba wayo
Ngomhla ka-6 kuMatshi 2014, abaphathi be-Prila County, abaphendula i-call malunga nesithuthi esifuthayo, esitholakale eneminyaka engama-19 ubudala, uJessica Chambers, waqhaqhazela ngamatye athile kufuphi nesi sithuthi. Kubikwa ukuba, wakwazi ukuxelela abaphenduli bokuqala ababethelela ngokukhawuleza ekhaleni lakhe nasemqaleni, bamisa emlilweni ngaphambi kokuba afe kunye nokutshisa ngaphezu kweepesenti ezingama-98 zomzimba wakhe.
Nazi iziphumo zakamuva kwiimeko zeJessica Chambers:
Umvuzo onyuka kwiNkundla eFudumeleyo
NgoJan. 13, 2015 - Kungenanto yokuxoxa ngesitalato malunga necala elichazwe malunga ne dolophu encinci yaseMississippi yaseRandland, i-FBI inyuse umvuzo ngolwazi malunga nombulali wesifazane oneminyaka-19 ubudala owashiswa esaphila ngenyanga edlulileyo nethemba lokuba umntu athethe.
Umvuzo opheleleyo ngolwazi malunga nombulali kaJessica Chambers ufikelela kuma-43,000 wama-dollar, inani labaphenyi abathemba liya kukhulula umlomo emphakathini omncinci. Abaphathi bayavuma ukuba baneenkcukacha ezimbalwa zokuqhubeka uphando.
Ummeli weNkundla yeSithili sasePanola uJohn Champion uthemba ukuba umvuzo owongeziweyo uya kufumanisa amanqaku amaninzi.
"Ndisaba nethemba lokuba abantu baya kwenza into efanelekileyo ngaphandle kokuncedisa imali, kodwa asinakukunyaniseka ukuba imali ingaba ngumqhubi," u-Champion utshele abaphephandaba. "Le yimeko ephosakeleyo kakhulu endikufuneka ndijongane nayo kwiminyaka engama-22 ekunyanzelweni komthetho."
Akukho Ukubanjwa Kwimeko Ephilileyo
Ngomhla ka-9, 2014 - Umphathiswa weSithili sasePanola uDennis Darby uthe iziphathamandla zisebenza ngehora ukuqokelela ubungqina ekufeni okushisayo kukaJessica Chambers. UMphathiswa uDarby uthe abaphathi bafuna umntu onomdla kwimeko kwaye baqhubeka bexoxa nabanye a mangqina.
Abaphandi bahlola i-cell cell Chambers, efunyenwe kwisalathisi saloo moto, ukuba azame ukumisela ixesha lokuhamba kwakhe ngoMgqibelo, ngo-Dec. 6, kwaye achaze amangqina anokwenzeka malunga nolwazi malunga nelo.
Abaphathi baphinde bahlolisise i-video yokulinda kwi-sitrogi elula kwi-Highway 51 e-Courtland, e-Mississippi, apho uJessica wayeka khona ukufumana igesi ngoMgqibelo kwaye ngokucacileyo wabalekela kumntu owaziyo.
Ividiyo ibonisa uJessica ukuba aphume emotweni yakhe aze abone umntu ekhamera ebonakalayo. Ujonge kumntu aze ahambe ekhamera kwisikhokelo sakhe.
Emva koko enye ikhamera ibonisa umntu ekhatikhiti eliqhawulayo egcwalisa into ebonakala ngathi iyigesi ngaphambi kokuba ihambe ikhamera ngendlela efanayo noJessica. Kamva, uJessica ubuyela emotweni yakhe, ugqiba ukuphefumula igesi aze ahambe.
Phantse imizuzu engama-90 emva kokushiya isitolo esilungileyo, umntu othile wabiza u-9-1-1 ukubika isithuthi esivuthayo kwiHerron Road. Isisebenzi sokuzithandela somlilo esasiyiekhilomitha ezimbini ukuphendulwa kwesinye ikhwelo, sagijimela kwindawo.
Akukho nto ibanjelwe kwaye akukho namnye ogcinwe esichengeni ngokuphathelele ukufa kukaJessica okwesibhakabhaka ngoLwesibili, ngoDisemba 9, ngokweSigqeba soNcedisi weSithili uJay Hale.
Umfazi, Imoto Efunyanwe Ifunyenwe Ngamalamlilo
Ngomhla wama-6, 2014 - Abaphathi banethemba lokuba amagama aphelileyo omfazi abawafumana esitshisa ephilileyo kwiphondo yasemaphandleni yaseMississippi uya kubanceda basombulule ukubulala kwakhe. Ukuphendula ngomtshini we-9-1-1 malunga nomlilo wezithuthi, abavolontiya abasebenza ngokuzithandela bafumana u-Jessica Chambers oneminyaka engama-19 engasaphila kwaye imoto yakhe yavutha ngamatangatye ecaleni likaHerron Road ngaseNkantolo.
Amagumbi athathwe esibhedlele saseMemis, eTennessee apho kuthiwa ufile ngokushisa ngaphezu kweepesenti ezingama-98 zomzimba wakhe. I-Courtland i malunga neekhilomitha ezingama-60 ezantsi kweMemphis kunye ne-Interstate 55.
Ngaphambi kokufa kwakhe, izikhulu zathi uJessica wakwazi ukukhawuleza ngolwazi lokuqala lwabaphendulayo olungakhokelela kumbulali wakhe.
Ukugubungela ngokukhawuleza kwehla
Abaphandi bakholelwa ukuba umntu wayenoJessica ngaphakathi kwinqwelo yakhe. Bakholelwa ukuba wayebethekile entloko - wayenomkhonto omkhulu phezu kwentloko yakhe-kwaye mhlawumbi wayikhupha.
Omnye ke wathululela ekhawulezileyo ekhaleni lakhe nasemqaleni, wambeka ngomlilo.
Xa abaphathi beza kweso simo, uJessica wayehamba ngeenyawo zeHerron Road wagqitywa. Amalungu entsapho athi inxalenye yodwa yomzimba wakhe ongatshitshiswayo yayiyizinyawo zeenyawo zakhe.
Abaphenyi baseCanola, abaPhenyi beeNkundla, abazange batyhile into yokuba uJessica utshele abacimi bomlilo ngaphambi kokufa kwakhe, kodwa uyise, uBen Chambers, ongumatshini we-Ofisi kaSheriff, utshele abaphephandaba ukuba wabaxelela igama lombulali wakhe.
Akukho Ntsapho, Iintsapho Zithetha
Amalungu entsapho athi uYessica wayenalo isoka okanye omnye umntu ebomini bakhe babesazi ukuba ngubani na onesizathu sokulimaza intombazana ethandwayo.
"Wayengumntwana onothando, umntu, oneminyaka eyi-19 ubudala, wayegqibile isikolo esiphakamileyo." UBen Chambers watsho abaphephandaba. "Ndiyamthanda uyazi, Ndiyaxolisa ukuba uTaddy wayengekho kuye. Ndandithengisa indawo kunye naye ngomzuzu ukuba ndikwazi."
"Kuthatha ixesha lokuphefumula," kusho uChambers. "Kunzima ukuphefumula."
Unina kaJessica, uLisa Chambers, wabuza ukuba nabani na ulwazi malunga necala lokuza phambili.
"Baqwengule yonke into enayo," watsho. "Washiya ukuba ahlambulule imoto yakhe kwaye wayeya kufumana into yokutya." Wathi, 'Ndiyakuthanda, Mama. Ngexesha elilandelayo ndambona, wayeseMedi. "
Amagumbi athi ufuna ubulungisa kwintombi yakhe.
"Isiluleko sikaThixo siya kuba sibi kakhulu kunanto esinokuyenza," watsho.
Abahlobo baye bamisela iJustice Justice website yeJessica ukuze bagcine ityala lakhe phambi koluntu.
Isayithi yayinabantu abangu-42,096 "ukuthandwa" ngoLwesithathu, ngoDishumi 10.
Nabani na onolwazi uyacelwa ukuba axhumane ne-Ofisi ye-Sheriff kwi-662) 563-6230.
Iincwadi ezigqithiseleyo ngeNzululwazi yezoBungqina
Ukubulawa kokuThunjwa kwe-Oscar Grant: Okufuneka Ukwazi
Iincwadi zeSuzy Bishop kwi-Moonrise Kingdom
Iimfuno zee-Admissions ze-Admissions ze-Aday ne-Don't
Ubunqunu ngo-1970 ii-Sitcoms
Uludwe lweZikolo zoLuntu ze-Free Online kwi-Connecticut Students, K-12
Ngaphambi Kakhe Ukwakha: 5 Amanyathelo Ekhaya Lakho Elitsha
Imbali emfutshane yeTunisia